မြရွက်ဝေ: ဒီလိုလူကို မြင်လား?
... နှောင်ကြိုး ...
ရထားစောင့်ရင်း ဘူတာမှာ ကပ်ထားလေ့ရှိတဲ့ manner ပိုစတာတွေကို ဖတ်မိပြီး သဘောကျမိတာလေးတွေရှိတယ်။ ဂျပန်တွေက manner ကို အတော်လိုက်နာကြပါတယ်။ အားလုံးတော့လဲမဟုတ်ပါဘူး။ တွေ့မိသမျှထဲမတော့ busထဲ ရထားထဲ ဖုန်းပြောတာပါ။ ရထားထဲရော busထဲမှာပါ စီးနေတုန်း manner modeထားဖို့က အမြဲလို ကြေငြာပါတယ်။ ဦးစားပေးထိုင်ခုံနေရာတွေမှာဆိုရင်တော့ ဖုန်းကို shutdownလုပ်ဖို့ ကပ်ထားပါတယ်။ ကျမတော့ မေ့ပြီး manner mode မထားမိတတ်တာများတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းလာခဲ့ရင်လဲ မကိုင်ပါဘူး။ ဖုန်းအသံကို အကျယ်ကြီး မထားထားတာမို့ အိပ်ထဲထည့်ထားမိရင် တော်ရုံနဲ့ ဖုန်းသံ မကြားရတတ်လို့ပါ။ တခါမြည်ပြီးမှ ဘယ်သူလဲကို ကြည့်၊ အပြင်ရောက်မှ ပြန်ဆက်ရင်ဆက်၊ ပြန်မဆက်နိုင်သေးရင် manner modeပြောင်းထားလိုက်တယ်။ တချို့ကျ တဖက်သားကို ခု ရထားထဲမှာမို့ နောက်မှပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး အမြန်ချလိုက်ကြတယ်။ တချို့ကျ တကယ်ကို အကျယ်ကြီးပြောနေတော့တာ အကြာကြီးဘဲ။ နောက်ထပ် ကြုံရတာများတာက နားကြပ်တပ် သီချင်းနားထောင်တာပါ။ ပုံမှန်လောက်ဆို ပတ်ဝန်းကျင်ကို အသံမလျှံထွက်တတ်ပါဘူး။ တချို့များ volumeကို အဆုံးထားပြီး နားထောင်သလားမှတ်ရအောင် သုံး လေးလှမ်းအကွာကနေ သူနားထောင်နေတဲ့သီချင်းကို အားလုံး ကြားနေရတယ်။ အလှပြင်တဲ့သူတွေလဲ တွေ့မိတယ်။ ဆင်းမယ့်ဘူတာ မရောက်မချင်း တောက်လျှောက် မှန်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ပြင်နေတော့တာ။ တချို့က ရထားထဲရောက်မှ အစအဆုံး အလှပြင်တယ်၊ တချို့ကြတော့ ပြင်လာပြီးသားကို တချိန်လုံး သနေတယ်။ ဒီလိုမျိုး အပြုအမူတွေကို ဂျပန်မှာ "မန်နားအိဟန်း (マナー違反/ Breach of manners)" နိုင်ငံကြီးသား မပီသတဲ့ အပြုအမူလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
အများကို အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့ အပြုအမူ မလုပ်မိစေဖို့ ဘူတာမှာ manner ပိုစတာတွေ ကပ်ထားတတ်တယ်။ အဲဒီထဲကမှ တိုကျိုမက်ထရိုရဲ့ ဒီနှစ်ထုတ် manner poster series ကို အတော် သဘောကျမိတယ်။ တိုကျိုမက်ထရိုက ၁၉၇၄ခုနှစ် ၉လပိုင်းကစပြီး လစဉ် manner ပိုစတာ အသစ်ကပ်လေ့ရှိပါတယ်။ နှစ်တိုင်း ခေါင်းစဉ်တခုထားပြီး အဲဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ အကိုက်ပုံတွေကို လစဉ် အသစ်ကပ်ပါတယ်။
၂၀၀၅ခုနှစ်အထိထဲမတော့ "ကမ္ဘာ့အပျော်ဆုံး မက်ထရိုဆီသို့" "ပိုပြီး ပြုံးပန်းဝေတဲ့ မက်ထရိုဆီသို့" (世界でいちばん、ハッピーなメトロへ。もっと、スマイルメトロへ。)
၂၀၀၆ခုနှစ်မှာတော့ "ပျော်ရွှင်ဖွယ် အပြုအမူ အားလုံးလဲ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်တိုင်လဲ စိတ်ချမ်းသာ" (Happy Manner～みんながキモチいい。あなたもキモチいい。)
၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ "သက်ကြီးအပြုအမူ သက်ငယ်အတုခိုး" (おとながお手本です。)
၂၀၀၈ / ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ " ～～မှာ ပြုလုပ်ကြစို့" (○○でやろう。)
၂၀၁၀မှာတော့ "ထပ်ပြီး ပြုလုပ်ကြစို့" (またやろう。)
ဒီနှစ် ၂၀၁၁ကျ "ဒီလိုလူကို မြင်လား?!" (こんな人を見た。) ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပါ။ အရင်နှစ်တွေနဲ့မတူ တိရစ္ဆာန်ပုံလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ သဘောကျမိတာမို့ လစဉ်အလိုက်ပုံလေးတွေ တင်လိုက်ပါတယ်။
ဈာန်ဝင်ပြီး အလှပြင်၊ မှန်ကြည့်တာထက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်တတ်ပါ
သူများကိုမှီပြီး တခေါခေါ၊ အိပ်ပျော်သူ့မျက်နှာဘေးက အခက်တွေ့နေသူမျက်နှာ
ကြားဖြတ်မဝင်ပါနဲ့၊ စည်းစနစ်တကျ တန်းစီပါ
ထီးကရေစက် သူများတွေဆီ စင်ကုန်ပြီလား?
မလောပါနဲ့ မပြေးပါနဲ့၊ အေးအေးဆေးဆေး ပြုလုပ်ပါ
ကပ်ထိုင်ပေးပါ တထိုင်စာလောက် ရပါစေ။ ကူညီပါနော်
Posted by မြရွက်ဝေ at 10:01 PM
ဟားဟား ချစ်စရာလေးတွေ :)
ဒီလ ကြောင်လေးပုံတွေ့တယ် အစ်မရဲ့... ကြောင်လေး ချစ်စရာလေးဆိုပြီး ကြည့်ပြီး အောက်ကစာကို မဖတ်မိဘူး။ အခုအစ်မစာ ဖတ်မှဘဲ အဲ့လိုစီးရီး နဲ့ဆိုတာ သိတော့တယ်... :) အနည်းဆုံး တပတ် ငါးရက် ရထားစီးရတာမို့ အားလုံးကို မြင်ဖူးတယ်... :( လူတွေကတော့ နေရာတိုင်းမှာ အမျိုးမျိုးဘဲ... တခါ ဘေးနားမှာထိုင်နေတဲ့ ယောက်ျားကြီးတယောက် ဆေးလိပ်ထသောက်တာလေ ခွန့်ဘေးက အဖွားကြီးက ရထားထဲမှာ ဆေးလိပ်မသောက်ရဘူးဆိုတာ မသိဘူးလား ဆိုပြီး အော်တော့မှ あ！すみませんဆိုပြီး
ရပ်သွားတယ်... အဲဒါမျိုးကျတော့ マナーဆိုတဲ့ အဆင့်တောင် မဟုတ်တော့ဘူးနော်...
Pai HmooAein said...